Uchwepheshe we-Semalt ukhuluma nge-imeyili eyingozi kunazo zonke e-Spammer Emhlabeni
Esikhathini salesi sihloko, uJulia Vashneva, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu Semalt Amasevisi Edijithali, uzokutshela mayelana ne-spammer edume kakhulu futhi eyingozi emhlabeni jikelele - ugaxekile waseRussia, Peter Levashov.
Izinxusa zaseMelika zaya eMoscow eminyakeni embalwa eyedlule ukucela usizo lwabahlobo baseRussia. Babefuna ukubopha abagaxekile be-imeyili abayingozi kakhulu emhlabeni kepha bahlaselwa. Inkampani yase-American yokuphoqa umthetho yabatshela ngale ndaba. U-spammer wasebenzisa igama elithi pseudonym uPeter Sevara futhi walondolozwa uhulumeni waseRussia - honeymoon tour packages south america. Ngakho-ke, akekho owayengamthinta noma amlimaze. Ekugcineni, ama-ejenti abuyela emuva futhi alinda kuze kube yilapho isisulu sabo singenza amaphutha.
Izindaba ezinhle ukuthi wenza iphutha waya eBarcelona ngezinsuku zokuphumula. Uhulumeni waseSpain ubelokhu emlandela iminyaka eminingi, futhi amaphoyisa aqala ukungena emakamelweni ehhotela lapho lo spammer ehlala khona nomkakhe namanye amalungu omndeni. Uboshwe ngaleso sikhathi, kanti izikhulu ze-Federal Bureau of Investigation zenze isinqumo sokuphenya leli cala. Lo mfana omubi wayevale amathani amakhompyutha ngokuwakhukhula ngamagciwane. Ekugcineni, uMnyango Wezobulungiswa ushicilela amaphepha enkantolo asola leli hacker. Igama lakhe lokuqala nguPeter Levashov. Ubekwa icala lokukhwabanisa nokukhishwa ngokungemthetho kwezingxoxo zobuchwepheshe. UPetru kulindeleke ukuba adluliselwe e-United States ukuze aqhubeke nophenyo..
Izikhulu zithi uboshiwe futhi inethiwekhi yakhe yayiningi kunanini ngaphambili. Sekuyiminyaka, lo muntu wasebenzisa umbuso wakhe ukuze azenzele ngokwenza imisebenzi yokukhwabanisa. UMengameli Donald Trump unethemba lokuthi lo spammer uzobona isiphetho sakhe maduzane. Esikhathini esedlule, i-Kremlin yayidlulisele ukuboshwa okufanayo kulo lonke izwe. Amaphoyisa aseSpain ambophe ngempumelelo uMnu. Levashov; futhi ngaphambi kwalokho, waboshwa kwelinye izwe kodwa wakhululwa ngenxa yokubandakanyeka kukahulumeni waseRussia.
Manje, kulindeleke ukuthi abanye abakwa-spammers bazoboshwa njengoba ohulumeni bethatha izinyathelo ezinzima ngokumelene nabo. Amaphoyisa kanye nabasebenzi be-cybersecurity balandela i-Levashov iminyaka eminingi, okucacile kusukela ngo-2006. Kuze kube manje, le ndoda yenza izinkulungwane zamaRandi ngokusebenzisa inethiwekhi yabangani bayo futhi ichithe amakhompyutha amaningi ngokufaka injini yakhe engalungile (Kelihos).)
Izindleko zemikhankaso yogaxekile zisuka ku-$ 300 kuya ku-$ 700 nge-imeyili. Wanikeze izaphulelo kumakhasimende akhe, ebahola ekunikezeni kwakhe futhi wayefuna ukweba imali yabo. Umgomo oyinhloko kaMnu. Levashov kwakuyimakhompiyutha aseMelika. Kuze kube manje, akucaci ukuthi kungani engozini impilo yakhe ngokuya kwelinye izwe nomndeni wakhe. Kodwa-ke, abacwaningi be-cybersecurity bathi uzame ukufihla ukuthi uyubani lapho ehamba esuka eRussia eya eSpain.
I-FBI ithole ulwazi ukuthi uLevashov washiya izwe lakhe futhi wayeya eBarcelona ngezinsuku zokuphumula. Amaphoyisa aseMelika athathe isinyathelo ngokushesha futhi ayefuna ukumbopha ngokushesha. Ngesikhathi sokuthunywa, ama-FBI agents asebenzisa amandla anikezwe ngaphansi kwezichibiyelo kulokho okubizwa ngokuthi uMthetho we-41 weMigomo Yombuso Yenqubo Yezobugebengu. Kwabavumela ukuba bamise lo muntu ekutheleleni amakhompyutha amaningi nangama-virus. Manje, uLevashov uzochitha impilo yakhe yonke ejele.